နော်ဝေနိုင်ငံတွင် လေး-မြားသုံး၍ တိုက်ခိုက်မှုအတွင်း လူ ၅ ဦးသေဆုံး ၊၂ ဦးဒဏ်ရာရဟု ရဲတပ်ဖွဲ့ပြော - Xinhua News Agency
ကိုပင်ဟေဂင် ၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
နော်ဝေနိုင်ငံ အော်စလိုမြို့အနောက်တောင်ဘက် ၈၂ ကီလိုမီတာအကွာ Kongsberg မြို့လယ်၌ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားတစ်ဦးက လေးမြားလက်နက်သုံး၍ တိုက်ခိုက်မှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ ၅ ဦးသေဆုံးပြီး အခြား ၂ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဒဏ်ရာရသူနှစ်ဦးအနက် တစ်ဦးမှာ အရပ်သားဝတ်စုံဝတ်ထားသော ရဲအရာရှိတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ဒဏ်ရာရသူနှစ်ဦးစလုံးကို ဆေးရုံတင်ကုသပေးထားကြောင်း အရှေ့-တောင်ပိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဌာန အကြီးအကဲ Oyvind Aas ကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်ဟု နော်ဝေအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်း(NRK) က အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက် ညပိုင်းတွင် ထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်။
“ ရဲတပ်ဖွဲ့က သတင်းပေးပို့ချက်တွေ မရရှိခင်လေး ညနေ ၆ နာရီ ၁၃ မိနစ်လောက်မှာ တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ ၊ လူတစ်ယောက်က လေးမြား လက်နက်သုံးပြီး လူအုပ်ထဲကို ပစ်ထည့်လိုက်တာပါ” ဟု အစောပိုင်းတွင်ပြုလုပ်သော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ Aas ကပြောကြားခဲ့သည်။
တိုက်ခိုက်မှုကျူးလွန်သူကို ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီ ၄၀ မိနစ်တွင် အခင်းဖြစ်နေရာအနီးတစ်ဝိုက်၌ပင် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့အကြီးအကဲက ဆိုသည်။ ၎င်းအား ဖမ်းဆီးစဉ်ထွက်ပြေးရန် ကြိုးစားသဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့်သံသယတရားခံအကြား ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
“ လတ်တလောရထားတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဒီတိုက်ခိုက်မှုကို အမျိုးသားတစ်ယောက်ထဲကပဲ ကျူးလွန်ခဲ့တာပါ ၊ ဒါဟာ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဟုတ်မဟုတ် သူ့သဘောသဘာဝကို လေ့လာနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကောက်ချက်ချဖို့တော့ သိပ်ကိုစောနေပါသေးတယ်” ဟု Aas က ပြောကြားခဲ့သည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် လက်ရှိတွင် အခင်းဖြစ်တိုက်ခိုက်မှုကို အကြမ်းဖက်မှုတစ်ခုဟုတ်မဟုတ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း နှင့် ယင်းနေရာအနီးတစ်ဝိုက်အား ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ကာ အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြောင်း သိရသည်။
“ ရာဇဝတ်မှုဖြစ်သွားတဲ့နေရာကိုရဲတပ်ဖွဲ့က ထိန်းချုပ်ထားပါတယ် ၊ ပြီးတော့ နောက်ထပ်သေဆုံးဒဏ်ရာရသူရှိမရှိ ဆက်လက်ရှာဖွေနေသလို မှုခင်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေနဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေပါတယ် ၊ ညတုန်းက ဒီနေရာမှာဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လဲဆိုတာ သိရဖို့ ဖြစ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးသက်သေခံချက်တွေရဖို့ မျက်မြင်သက်တွေကို စစ်ဆေးမေးမြန်းနေပါတယ်” ဟု Aas က ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။(Xinhua)
COPENHAGEN, Oct. 13 (Xinhua) — At least five people were killed and two others injured inaseries of attacks byaman carryingaweapon for shooting arrows in the provincial town center of Kongsberg, some 82 km southwest of the Norwegian capital city of Oslo early Wednesday evening, police said.
“These crime scenes are secured by the police, and then also searched for more victims and investigated by forensic technicians. We are questioning witnesses to the incidents to get as goodapicture as possible of what happened here tonight,” Aas said. Enditem
နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် သေနတ်သမားများ၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် လူ ၃၅ ဦးထက်မနည်း သေဆုံး
နော်ဝေအပျော်စီးသင်္ဘောတွင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရောဂါကူးစက်မှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် သင်္ဘောခရီးစဉ်များ ခေတ္တရပ်ဆိုင်းလိုက်ရ